ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိပါက တင်ပြရန်နှင့် ဈေးကွက်ပြောင်းလဲမှုကို အစဉ်မပြတ် လေ့လာသုံးသပ်ရန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြား – Eleven Media Group
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိပါက တင်ပြရန်နှင့် ဈေးကွက်ပြောင်းလဲမှုကို အစဉ်မပြတ် လေ့လာသုံးသပ်ရန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ပြောကြား
Posted on October 11, 2018 October 12, 2018 by ဇေယျာငြိမ်း
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်မှု အခြေအနေအား ဖော်ပြထားမှုကို တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ဇေယျာငြိမ်း)
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းဈေးကွက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်ချက်များရှိပါက တင်ပြရန်နှင့် လက်ရှိဈေးကွက်တွင် ဖြစ်ပေါ်ပြောင်းလဲမှု အခြေအနေများကို အစဉ်မပြတ် လေ့လာသုံးသပ်နေရန် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်းက ပြောကြားသည်။
အောက်တိုဘာ ၈ ရက်က စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးစိုးဝင်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ ငွေချေးသက်သေခံလက်မှတ် လုပ်ငန်းကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဒုတိယ၀န်ကြီး ဦးမောင်မောင်ဝင်းနှင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းသို့ သွားရောက်၍ ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၏ စတော့ရှယ်ယာ အရောင်းအ၀ယ် ဆောင်ရွက်မှု အခြေအနေများကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် အများပြည်သူသို့ ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ပညာပေး အစီအစဉ်များ စဉ်ဆက်မပြတ် ဆောင်ရွက်သွားရန် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့သည်။
လက်ရှိအချိန်တွင် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၌ First Myanmar Investment Co,Ltd.(FMI)၊ Myanmar Thilawa SEZ Holdings Public Ltd.(MTSH)၊ Myanmar Citizens Bank Ltd.(FPB)၊ TMH Telecom Public Co,Ltd.(TMH) များက စာရင်ဝင်ကုမ္ပဏီများအဖြစ် ရှယ်ယာများ ရောင်းချနေခြင်းဖြစ်သည်။
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၏ စက်တင်ဘာလ အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်မှု ကျပ်သိန်း ၉၅၀၀ ကျော်သာရှိပြီး MCB ရှယ်ယာမှာ ကျပ်၂၉၇ သိန်းကျော်နှင့် TMH ရှယ်ယာမှာ ကျပ် ၃၇၇ သိန်းကျော်သာ အရောင်းအ၀ယ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
FMI ၏ ရှယ်ယာတစ်စုလျှင် အမြတ်ဝေစု ကျပ် ၁၀၀ နှင့် အစုရှယ်ယာ ၂၀ လျှင် ရှယ်ယာတစ်စု Bonus Share ခွဲဝေပေးမှု၊ MTSH ရှယ်ယာတစ်စု ကျပ် ၂၃၀၊ FPB ရှယ်ယာတစ်စု ကျပ် ၂၀၀၀၀၊ MCB ရှယ်ယာတစ်စု ကျပ် ၂၀၀ နှင့် TMH ရှယ်ယာတစ်စု ကျပ် ၂၀၀ အမြတ်ခွဲဝေပေးမည်ဟု ကြေညာခဲ့မှုများကြောင့် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၏ ဇူလိုင်လ အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်မှု ပြန်လည်မြင့်တက်လာပြီး ယခုနှစ်အတွင်း အများဆုံးအဖြစ် ကျပ် ၁ ဒသမ ၂၃ ဘီလျံကျော် အရောင်းအ၀ယ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးနောက် သြဂုတ်လတွင်လည်း ဆက်လက်မြင့်တက်ခဲ့ကာ ယခုနှစ် ရှစ်လအတွင်း အများဆုံးအဖြစ် ကျပ် ၁ ဒသမ ၅ ဘီလျံကျော်ဖိုး ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပြီးနောက် စက်တင်ဘာလတွင် ကျဆင်းလာခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တစ်ရက်လျှင် လေးကြိမ် ဈေးကွက်အရောင်းအ၀ယ် ပြုလုပ်နေသည့် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၏ စက်တင်ဘာလအတွင်း အရောင်းအ၀ယ် ဖြစ်ပေါ်မှုများမှာ FMI က ကျပ်သိန်း ၃၃၀၀ ကျော်၊ MTSH က ကျပ် သိန်း ၄၇၀၀ ကျော်၊ FPB က ကျပ် ၇၁၆ သိန်းကျော်၊ MCB ရှယ်ယာမှာ ကျပ်၂၉၇ သိန်းကျော်နှင့် TMH ရှယ်ယာမှာ ကျပ် ၃၇၇ သိန်းကျော် အရောင်းအ၀ယ် ဖြစ်ပေါ်ထားသည်။
၂၀၁၈ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်တွင် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း$ ရှယ်ယာ ဈေးနှုန်းများမှာ FMI ရှယ်ယာတစ်စုကို ကျပ် ၁၀,၅၀၀၊ MTSH ရှယ်ယာတစ်စုကို ကျပ် ၂,၉၀၀၊ MCB ရှယ်ယာတစ်စုကို ကျပ် ၇,၁၀၀၊ FPB ရှယ်ယာတစ်စုကို ကျပ် ၂၄,၅၀၀၊ TMH ရှယ်ယာတစ်စုကို ကျပ် ၂,၈၀၀ အသီးသီးရှိကြောင်း ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းမှ သိရသည်။
Posted in BusinessTagged ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း
သီလ၀ါရှယ်ယာ စတင်ရောင်းချသည့် တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း အနိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်းအဖြစ် ရှယ်ယာတစ်စု ကျပ် ၃၂၀၀ သို့ ထိုးဆင်း
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် ရောင်းချနေသည့် သီလ၀ါရှယ်ယာ၏ ဈေးနှုန်းများမှာ စတင်ရောင်းချသည့် တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း အနိမ့်ဆုံးဈေးနှုန်းအဖြစ် ရှယ်ယာတစ်စု ကျပ် ၃၂၀၀ သို့ ထိုးဆင်းခဲ့ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၈ ရက် ဈေးကွက်အရောင်းအ၀ယ် ဖြစ်မှုများအရ သိရသည်။ သီလ၀ါရှယ်ယာသည် ရှယ်ယာခွဲစိတ်မှုမပြုမီ
သြဂုတ် ၁ ရက်တွင် ကုမ္ပဏီများဥပဒေ စတင်အသက်ဝင်သော်လည်း စတော့အိတ်ချိန်းရှိ အစုရှယ်ယာများကို နိုင်ငံခြားသားများ ၀ယ်ယူရောင်းချခွင့် မပြုနိုင်သေးကြောင်း ကြေညာ
သြဂုတ် ၁ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေ စတင်အသက်ဝင်သော်လည်း စတော့အိတ်ချိန်းရှိ အစုရှယ်ယာများကို နိုင်ငံခြားသားများ ၀ယ်ယူရောင်းချနိုင်ရန် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသေးကြောင်းနှင့် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းရှိ FMI အစုရှယ်ယာများကို နိုင်ငံခြားသားများ ၀ယ်ယူခွင့် ရရှိနိုင်ဦးမည် မဟုတ်ကြောင်း ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းက သြဂုတ်
စတော့အိတ်ချိန်းတွင် FPB ရှယ်ယာတစ်စု ကျပ် ၂၃၀၀၀ သာဖြစ်သော်လည်း အစုတစ်စု အမှန်တကယ်တန်ဖိုး ၃၄၂၁၉ ကျပ် ရှိသဖြင့် ရရာဈေးဖြင့် ရောင်းချခြင်းမှာ ရှယ်ယာရှင်များ နစ်နာနေ
ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်းတွင် ပထမ ပုဂ္ဂလိကဘဏ် (FPB) ရှယ်ယာတစ်စု ကျပ် ၂၃၀၀၀ ခန့်သာဖြစ်နေသော်လည်း ရှယ်ယာတစ်စု၏ အမှန်တကယ်တန်ဖိုး (Fair Value) မှာ ၃၄၂၁၉ ကျပ်အထိ ရှိနေသဖြင့် ရှယ်ယာများကို ရရာဈေးဖြင့် ရောင်းချခြင်းမှာ ရှယ်ယာရှင်များ
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်မှု ရာခိုင်နှုန်း ၇၀ ကျော်ကျဆင်းခဲ့သော်လည်း Block Trading အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်မှု ကျပ်ခုနစ်ဘီလျံကျော်ဖြစ်ပေါ်ကာ ယမန်နှစ်ထက် ရာခိုင်နှုန်း ၇၀ ကျော်မြင့်တက်
၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၏ အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်မှု ၂၀၁၆ ခုနှစ်ကထက် ရာခိုင်နှုန်း ၇၀ ကျော်ကျဆင်းခဲ့သော်လည်း Block Trading (ရှယ်ယာအရေအတွက် အမြောက်အများအရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်မှု) အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်မှုတွင်မူ ကျပ်ခုနစ်ဘီလျံကျော်ဖြစ်ပေါ်ကာ ယမန်နှစ်ထက် ရာခိုင်နှုန်း ၇၀ ကျော်မြင့်တက်ခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၏
အမြတ်ဝေစု ခွဲဝေပေးမှုများကြောင့် စတော့အိတ်ချိန်း၏ ဇူလိုင်လ အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်မှု ယခုနှစ်အတွင်း အများဆုံးဖြစ်ပေါ်
အမြတ်ဝေစုများ ခွဲဝေပေးမှုကြောင့် ရန်ကုန်စတော့အိတ်ချိန်း၏ ဇူလိုင်လ အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်မှု ပြန်လည် မြင့်တက်လာပြီး ယခုနှစ်အတွင်း အများဆုံးအဖြစ် ကျပ် ၁ ဒသမ ၂၃ ဘီလျံကျော် အရောင်းအ၀ယ် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်း ရန်ကုန်စတော့ အိတ်ချိန်း၏ လစဉ်အရောင်းအ၀ယ် ဖြစ်မှုဆိုင်ရာ
Weekly Eleven ဂျာနယ်…